Shina Alumina silika afo mirehitra ambany baran-java-mihetsika vita amin'ny tanimanga vita amin'ny tanimanga ho an'ny mpanamboatra fatana sy mpamatsy | Hongqiqu
Size 230X114x65 / 75mm, 230 × 150 × 75mm, 230 × 150/135 × 75mm, ect. (Araka ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny famokarana)
endrika biriky vita marika, Bikao mahitsy, biriky miorina manokana, biriky amam-bika, biriky trapezoidal, Bika miaraka amin'ny maketera, biriky vita, biriky amin'ny karina, ect.
Asa ny mari-pana 1400 ℃
Material tanimanga, kaolin, tanimanga flint
Sintan'ny fampiharana indostrian'ny lafaoro
Service tanimanga fanaovana famolavolana tanimanga, Production, fananganana
Ny biriky vita amin'ny SK30 mihoatra ny SK30 dia misy alumina mihoatra ny 30% ary namboarina avy amin'ny akora fitaovana avy amin'ny fahadiovan'ny Bauxite sy tanimanga reflexory. Ho an'ny fanompoana manoloana ny fepetra sarotra, ny biriky alumina Rewell Alumina dia manana tanjaka mekanika tena tsara, tsara ny fanoherana ny famonoan-dranomasina, ary mahatohitra ny fanafody simika amin'ny alàlan'ny vilatile alkaies sy ny slag sasany. Manamboatra sy mamolavola biriky alumina izahay mba hanomezana ny fepetra takian'ny karazana serivisy serivisy tsara hifehezana tsara ny kalitao.
Oram-borona mifono vy no iray amin'ireo fanelanelanan'ny afo marobe. Ny votoatiny Al2O3 dia eo amin'ny 30% ka hatramin'ny 48%. Ny tanimanga vita amin'ny tanimanga dia vita amin'ny tanimanga refractory na kaolin sy clinker tanimanga miaraka amina tanimanga, izay noforonina tamin'ny fomba semi-maina na plastika ary roango amin'ny mari-pana ny 1250-1420.
Toetra mampiavaka ny biriky refectory tanimanga:
1. ambany fahakely sy fahasamihafana mahery.
2. Ny fanoherana tsara amin'ny fahazoana mibontsina ary ny fanoherana tsara.
3. Ny herin'ny hafanana, ny asa fanompoana lava.
Fanondroam-biriky ny biriky mifono vy
Item Clay biriky
Manalefaka ny mari-pana ao ambanin'ny entana, 0.2Mpa 1250 1350 1370 1420
Porosiana hita,% ≤ 22-26 20-24 20-22 18-20
Drafitra be, g / cm3 1.9-2.0 1.95-2.1 2.1-2.2 2.15-2.22
Heriny mangatsiaka, Mpa ≥ 20 25 30 40
Previous: Fanamboarana fitaovana fanamboarana ny Magnesia Gunning ho an'ny tsipika fanaka Electric Fitaovana
Manaraka: azs refractory block ampiasaina amin'ny lafaoro fitaratra